Iphrofayili yenkampani | IZhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
IZhongrong Technology Corporation Ltd (ikhodi yamasheya: 836455), yasungulwa ngo-1999 okungenye yamabhizinisi amaShayina Kazwelonke Asezingeni Eliphakeme agxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-ethanol engeyona okusanhlamvu nemikhiqizo yayo esezansi. Ingumkhiqizi omkhulu we-ethanol ongekho okusanhlamvu eChina, nomkhiqizi omkhulu we-acetate eNyakatho yeChina naseNyakatho-Mpumalanga yeChina. Imikhiqizo ithengiswe ezimakethe zombili zasekhaya nase-Asia, emazweni aseYurophu ngenzuzo yonyaka eyi-USD150 million. Inezinkampani ezingasizi eziphethwe ngokuphelele, iTangshan Zhongrong Technology Co, Ltd. neShanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
IZhongrong Technology Corporation Ltd iphethe isikhungo se-R & D sesi-3 sesiFundazwe futhi ithole impumelelo engaphezu kweshumi nanye kwezesayensi nezobuchwepheshe ezingaphezulu kwamazinga okuhola asekhaya, kanye namalungelo obunikazi angaphezu kwamashumi amane nambili. Kuyintokozo enkulu ukuthi sesiqalise uHlelo Lukazwelonke Lethoshi kanye noHlelo Lukazwelonke Lomkhiqizo Omusha Osemqoka. Siyinkampani yokuqala eChina ukuthuthukisa i-ethanol engeyona okusanhlamvu nokwenza impumelelo kanye namalungelo obunikazi ahlobene nawo. Sineziphiwo eziphezulu zokuphatha nezobuchwepheshe ezivela emanyuvesi amaningi adumile, futhi sesibe yisiqalisi nomakhi we-standard ethyl ye-ethyl ye-China.